Tag: social media lifecyle | Martech Zone
Uwa: social media lifecyle
Ihe omuma ihe omuma a dabara na uzo anyi na etinye maka ndi ahia anyi na ulo oru mgbasa ozi anyi: Nlekota oru - anyi na-enyocha ma ulo oru na ndi oru anyi. Nyochaa - anyị na-enyocha akara ahụ iji mata ụdị aha na mmetụta ọ bụla. Anyị na-enyocha ụlọ ọrụ ahụ iji chọta ohere, nyochaa ndị asọmpi ma nyere aka mepee atụmatụ. Na - emekọ ihe ọnụ - iji lelee ndị na-ajụ ase ase na usoro gị niile bụ isi. Nkwalite nke otu onye na-ajụ site na nke ọzọ,